OMN:Oduu Sadaasa 30,2015 Afa yaa’iin Caffee Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jiraattota magaalaa Burraayyu waliin marii geggeessaniin, Labsiin Magaalota Oromiyaa dhihoo kana baye miidhaa hin qabu. Dogongorri yoo jiraates ni sirreessina jedhan. | Fighting for Freedom and Equality
OMN:Oduu Sadaasa 30,2015 Afa yaa’iin Caffee Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jiraattota magaalaa Burraayyu waliin marii geggeessaniin, Labsiin Magaalota Oromiyaa dhihoo kana baye miidhaa hin qabu. Dogongorri yoo jiraates ni sirreessina jedhan.
Maastar Pilaanii Finfinneetis ummanni Oromoo yoo hin fudhanne hujii irra hin oolu jedhan.
Maastar pilaaniin Finfinnee hujii irra ooluu fi dhiisuu isaa ilaalchisee, mariin jiraattota godina addaa Oromiyaa nannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti geggeeffamee akka jiru beekkameera.
Qondaalota OPDO marii kana geggeessaa jiran keessaa afa yaa’iin Caffee Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, jiraattota bulchiinsa magaalaa Burraayyuuf haasaya taasisaniin, murtii ummataa malee kongumaa maastar pilaaniin Finfinnee hujii irra ooluu hin qabu jedhan.
Obboo Lammaan akka jedhanitti, amma booda bulchiinsi magaalaa Oromiyaa keessatti argamu kamuu, muramee mootummaa Federaalaa jala hin galu jedhan.
Maastar pilaaniin Finfinnee haga fedhes faayidaa ummattootaa qabaachuu bira darbee, dachee fi samiidhaafis bu’aa kan qabu yoo taate, ummanni Oromoo haga hin fudhatinitti hujii irra hin oolfamu jedhan.
Itti dabaluun obboo Lammaan akka hirmaattotaaf himanitti, Labsiin Caffee Oromiyaatiin murtaahee darbe kun, dogoggora kan qabaatu yoo taate, hambisuu fi jijjiiruu ni dandeenya jedhaniiru.
Caffee Oromiyaa hoogganaa kan jiru ana kan jedhan obboo Lammaan, labsiin kun ummata keenya kan miidhu yoo taate, dhaabudhaaf humna aangoo gahaa qabaachuullee akkasitti ibsanii jiru.
Sagaleen waraabbii galma wal gahichaa irraa nu dhaqabe akka ibsutti, hirmaattoonni marii kanarraa qooda fudhatan, maastar pilaaniin Finfinnee gonkumaa hojirra akka hin oolle cimsanii kan akeekkachiisan yoo ta’u, humnaan hojitti hiikuuf itti deemnaan garuu, rakkinoonni hedduun dhalachuu akka malanis ibsanii jiru.
Labsiin magaalota ammoo kan dantaa saba Oromoo miidhu waan ta’eef, hatattamaan qoratamee siraahuu akka qabus hubachiisanii jiran.
Waadaan Obbo Lammaa Magarsaa Maastar Pilaniin ni dhaabbata, labsiin magaalotaaas ni fooyya’a kan isaan jedhan kun, dhugummaan kana jechuu isaanii ni shakkina jedhu xinxaltoonni tokko tokko.
Yeroo mormii waggaa lama duraatis obboo Abbaa Dulaa Gammadaa fi qondaalonni biraa waadaa walfakkaataa seenanis, qondalonni TPLF kan akka obboo Abba Tsahaayyee jaalattanis jibbitanis hojirra oola jedhanii dhaadachuu isaanii ni yaadatama.
← BBC to Start Broadcasting in Afan Oromo, AGCC Statement Says
More Photos: Sululta in the Aftermath of Violent Federal Police Response at Elementary School →